Côte d'Ivoire: Suuqa kaararka aqoonsiga Joometiga ee Joometiga - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Ivory Coast: suuqyada kaararka aqoonsiga ee joometiriga ah ee loo yaqaan 'Semlex - JeuneAfrique.com
Shirkadda Belgian ee Semlex ayaa ku guuleysatey martiqaad loo fidiyay cusboonaysiinta kaadhadhka Aqoonsiga Qaranka, oo horey loogu dhiibay shirkadda Faransiiska ee Idemia. Shirkadda ayaa sidaas ku guuleysatey suuqa si loogu soo saaro kaararka astaamaha, oo lagu qiyaaso bilyan Milyan CFA francs.
Shirkadda Semlex waxay ku guulaysatay inay la shaqeyso Xafiiska Qaranka ee Aqoonsiga (ONI) muddo laba iyo toban sano ah. Shirkadda arka ah "xal hirgelinta nidaamka uu ka samaysan yahay Diiwaanka Qaranka ee dadka dabiiciga ah (PBSR)" raran muddo laba sano ah, "leh mudnaanta in xalka si ay awood kaararka aqoonsiga qaranka ee wax soo saarka" ayaa sheegay in hadalka xukuumadda la sii daayay April 10.
>>> READ - Doorashooyinka: tiknoolajiyadda astaamaha ah ee sii kordhaya ee Afrika
"Nidaamka waxaa loogu talagalay in la soo saaro ugu yaraan 36 million kaararka inta lagu jiro mudada heshiiska, oo ay ku jiraan 12 million inta lagu jiro labada sano ee ugu horeeya, si ay u buuxiyaan kaararka aqoonsiga qaranka ee dib u cusboonaysiinta u baahan yahay in uu dhacayo sida June 2019" waxay sii waddaa xukuumadda.
Lacagta 460 FCFA
Mashruuca ayaa lagu taageeray by Sidiki Diakite, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Ammaanka, taas oo ahayd mawduuc in saxiixa amar ah madaxa gobolka Alassane Ouattara.
Sida ay sheegayaan qiyaasaha dowladda afjaro 2018, samaynta aqoonsiga jismiyeed kaararka smart in qaabka looga baahan yahay shuruudaha in ciidanka ee West African States Community Dhaqaalaha (ECOWAS) waa in ay ku kici 460 bilyan doolar FCFA.
>>> READ - Doorashooyinka: biometrics iyo tiknoolajiyada cusub ma aha damaanad qaad
Ninka Bellexka ah lama yaqaan gudaha dalka. Shirkadda ayaa la kulmay dib u dhacyo ku Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (DRC) iyo garsoorka Belgian ayaa baadhaysa shirkadda, oo qayb ka ah kiiska ka mid ah lacagta la dhaqay iyo eedeeyay musuqmaasuqa.
Shirkadda dowladda Ivory Coast doortay waxaa la hadhay ka dhanka ah Idemia Faransiis ah (hore Morpho), oo ahaa mas'uul ka ah heshiiska tan 2007. Musharixiinta kale ee nasiib darada ah: Gemalto Holland iyo Ivorian-Belgian Snedai-Zetes.